people Nepal » ग्लोबल टी–२० लिगमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन , लिए ५ खेलमा ८ विकेट ! ग्लोबल टी–२० लिगमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन , लिए ५ खेलमा ८ विकेट ! – people Nepal
ग्लोबल टी–२० लिगमा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन , लिए ५ खेलमा ८ विकेट !
क्यानाडामा जारी ग्लोबल टि-२० अन्तर्गत नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मोन्ट्रियाल टाइगर्सको जितमा ३ विकेट लिएका छन् ।
२०७६ सालका सार्वजनिक बिदा सार्वजनिक, कहिले कहिले हुन्छ बिदा